SanDisk® RescuePRO® Oke Dọhọ French | data Recovery
SanDisk® RescuePRO® Oke Dọhọ French
Home → SanDisk® RescuePRO® Oke Dọhọ French
Ka ibudata gị free version nke software RescuePRO®, biko soro ntuziaka n'okpuru:
1. Biko họrọ n'okpuru kwesịrị ekwesị nnata na kaadị ebe nchekwa gị SanDisk Oke.
>>>>atọ : họrọ bụla na ịdenyere aha na kwesịrị ekwesị, ma RescuePRO®, Deluxe bụ RescuePRO®.
**** Ọ bụrụ na ị nwere a coupon SSD RescuePRO®, Pịa ebe2. Biko họrọ button maka gị sistemụ. Nke a button na-emi odude n'okpuru họrọ zuo.3. Ịmụta otú na-enweta gị ebighị koodu site na gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID, nleta LC Tech ebighị Usoro Guide**Note : ma ọ bụrụ na gị mma maka RescuePro Deluxe nwere a Oghere Usoro ọgụgụ na-amalite na RPRID-0305,
biko kpọtụrụ SanDisk via http://www.sandisk.com/about-sandisk/contact-us/ maka ezi Oghere Usoro ọgụgụ.
Oghere Usoro ahụ ọnụ ọgụgụ na-e biri ebi na gị dere emebiela na adabaghị. Ị ga-enye SanDisk gị Oghere Usoro ọgụgụ RPRID-0305 zuru ezu iji nweta a nnọchi Oghere Usoro ọgụgụ **
Si vous utilisez Windows XP, Pịa ebe pour obtenir une version de RescuePRO® Standard compatible avec XP ou Pịa ebe pour une version de RescuePRO® Deluxe compatible avec XP.
Biko wụnye software na kọmputa. Mgbe mbụ ị mmalite, ị ga-jụrụ iji rụọ ọrụ gị software. Ị ga-enwe ohere a njikọ na-ewere gị na ebighị page. Biko pịa na njikọ na mezue ụdị, ijide n'aka na-dee gị Oghere Usoro ọgụgụ na-enweta gị free version nke software RescuePRO®.
Pịa ebe a maka ihe ebighị nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu.
Ọ bụrụ na kọmputa na nke ị wụnye nwere dịghị Internet ohere, ọ bụ ike izipu arịrịọ nke ebighị nọmba RescuePRO® Support inweta ihe ebighị koodu.
Ịkpọtụrụ anyị, biko họrọ n'okpuru button kwekọrọ gị sistemụ na mezue kọntaktị ụdị, ma ọ bụ na-akpọ anyị na (866) 603-2195 (ọnụ ọgụgụ US) ma ọ bụ (727) 449-0891. n'ihi na Europe, biko kpọtụrụ +44 (0)115 704 3306.